Tsy hovonoina ny iPhone X? Ity ny antony tena antony! - Iphone
mihidy hatrany ny iphone 6
iphone 6 nakatona fotsiny
Tsy afaka mamafa ny sary amin'ny iPhone aho
Tsy hovonoina ny iPhone X? Ity ny tena antony marim-pototra!
Tsy afaka mamono ny iPhone X ianao ary tsy fantatrao ny antony. Ny bokotra 'sisiny' vaovao an'ny iPhone X dia mampiditra fampiasa maro tsy natsangana tao amin'ny bokotra herin'ireo iPhones teo aloha. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho inona no hatao rehefa tsy ho faty ny iPhone X-nao !
Fa maninona aho no tsy afaka mamono ny iPhone X-ko?
Rehefa manindry sy mitazona ny bokotra sisiny amin'ny iPhone X ianao dia hampavitrika an'i Siri. Mety hampifangaro izany satria ny fanindriana sy ny fihazonana ny bokotra eo amin'ny ilany ankavanan'ny iPhones teo aloha dia mitondra anao amin'ny efijery iray izay milaza fa solafaka hiala amin'ny herinaratra . Avy eo, azonao atao ny mamono ny iPhone-nao.
Mba hamonoana iPhone X dia tsy maintsy atao izany tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny sy ny bokotra fidina ambany . Mitondra anao mankany amin'ny solafaka hamono ny efijery izay ahafahanao mamafa ny kisary herinaratra ankavia miankavanana hanakatonana ny iPhone-nao.
Azonao atao ihany koa ny mamono iPhone X amin'ny alàlan'ny Fikirana -> Ankapobeny -> Mihidy . Elaela kokoa ity, saingy backup tsara raha toa ka ny anao Tsy mety mandeha ny bokotra iPhone X .
ny iphone-ko miteny foana hoe mitady
Inona koa no mety hataon'ny bokotra iPhone X?
Ny bokotra eo anilany koa efa mahazatra misintona fampiharana amin'ny iPhone X , manao fandoavam-bola mampiasa Apple Pay , raiso Pikantsary iPhone X , ary maro hafa.
iphone 6 dia tsy mitsahatra mihodina sy mamono eo am-panafahana
Mbola tsy ho faty ny iPhone X-ko!
Raha tsy ho faty ny iPhone X anao na dia mitazona ny bokotra an-daniny sy ny bokotra aza ianao, dia mety hahita olana sarotra kokoa izahay. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, io rindrambaiko namboarinao io dia vokatry ny rindrambaiko iPhone fa tsy bokotra sisiny tapaka. Araho ny dingana eto ambany hamaritana sy hamahana ny tena antony tsy ahafahanao mamono ny iPhone X anao!
Alefaso mafy ny iPhone X-nao
Voalohany, andramo mafy ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone X anao, izay hanery azy hamono azy ary hiverina. Mety nianjera ilay rindrambaiko, nahatonga ny iPhone tsy hamaly tanteraka, na dia manindry ny bokotra aza ianao. Zahao ny tutorial video anay mba hianaranao haingana ny fomba famerenana mafy ny iPhone X anao!
Mampiasà assistiveTouch amin'ny iPhone X-nao
AssistiveTouch dia sehatra fidirana amin'ny fidirana iPhone X izay mametraka bokotra virtoaly mivantana eo amin'ny efijery. Ity bokotra ity dia afaka manao zavatra maro samihafa toy ny famonoana ny iPhone, fanidiana ny iPhone, fidirana amin'ny Control Center, sy ny maro hafa!
ivon-toerana fanarenana ireo mpidoroka zava-mahadomelina afaka
Raha te handrehitra ny HelpiveTouch amin'ny iPhone X dia mandehana mankany Fikirana -> Azo idirana -> Kasohana -> assistiveTouch ary atodiho ny switch eo ankavanan'ny assistiveTouch. Hiseho amin'ny fisehoan'ny iPhone ny bokotra virtoaly. Raha tsy tianao ny misy ny bokotra virtoaly dia azonao atao ny mampiasa ny rantsan-tànanao hisintona azy mankany amin'ny faritra hafa amin'ny efijery.
Raha hampiasa assistiveTouch hamonoana ny iPhone X anao dia tsindrio ny bokotra ary paompy Fitaovana . Avy eo, tsindrio ary tazomy Lock Screen ary bokotra volume mandra- solafaka hiala amin'ny herinaratra miseho.
Avereno DFU ny iPhone X
Raha tsy tapaka ny iPhone X-nao dia mety misy olana rindrambaiko lalindalina kokoa tokony horesahintsika. Mba hamahana ireo olan'ny rindrambaiko lalina ireo dia mamporisika izahay mametraka ny iPhone X ao anaty maody DFU ary mamerina amin'ny laoniny .
Raha tsy azonao vonoina ny iPhone X anao satria tapaka na vaky ny bokotra, dia tsy ho afaka hametraka ny iPhone amin'ny fomba DFU amin'ny fomba mahazatra ianao. Fa kosa, mila mampiasa programa rindrambaiko antoko fahatelo toa anao ianao Tenorshare 4uKey .
Amboary ny bokotra ila
Indraindray ianao tsy afaka mamono tsotra izao ny iPhone X satria azy tapaka ny bokotra , miraikitra, na mitohana. Raha izany no izy dia mila manamboatra azy ianao. Raha manana AppleCare + ianao dia ento ao amin'ny iPhone ny iPhone-nao Bar Genius eo an-toerana ary jereo raha afaka manamboatra azy io eo izy ireo.
Manoro hevitra ihany koa izahay hanin-kotrana , orinasa mpanamboatra izay handefa zon'ny teknisianina aminao ao anatin'ny adiny iray. Izy ireo koa dia handrakotra ny fanamboarana miaraka amin'ny antoka maharitra!
ny iphone-ko tsy handoa vola
Ny iPhone X-nao afaka Vonoy!
Novonoinao soa aman-tsara ny iPhone X-nao! Amin'ny manaraka dia tsy ho faty io dia ho hitanao izay hatao mba hamahana ny olana. Avelao ny fanontaniana hafa anananao ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany!